कर्णालीकाे पीडा : सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको रगतकाे भरमा नै बिरामीको उपचार « Name of Truth News : News Portal in Nepal
कर्णालीकाे पीडा : सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको रगतकाे भरमा नै बिरामीको उपचार
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, २६, मंगलवार ०९:४३
ब्लड बैंक नहुँदा कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा अधिकांश सुत्केरी महिलाको ज्यान चिकित्सक, सेना र प्रहरीले रगत दिएर बचाउने गरेका छन् । ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको जीवन तत्काल बचाउनका लागि रक्तदानसमेत गर्दै आएका छन् ।
गत गत १० भदौमा रक्तअल्पता भएर स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा जीवनमरणको दोसाँधमा छटपटाइरहेकी छेडागाड नगरपलिका-११ झाप्रा औलाकाटियाकी २२ वर्षीया लक्ष्मी चदाराको डा. भूपेन्द्रप्रकाश मल्लले रगत दिएपछि ज्यान बचेको थियो । मल्लले दुईपटक रगत दिएर सुत्केरीको ज्यान बचाएका छन् ।
लक्ष्मीका आफन्तले रगत जताततै खोजे पनि नपाएपछि अन्तिममा चिकित्सक आफैले रगत दिएर ज्यान बचाउनु परेको थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा कार्यरत नेप्लिजा पुनले पनि अर्की सुत्केरीलाई रगत दिएर ज्यान बचाएन् । नेप्लिजाजस्तै जाजरकोट स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा दर्जनौं सुत्केरीको स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना र प्रहरीले रगत दिएर ज्यान बचाएका छन् ।
रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाका नन्दराम खड्काले बावु मोतीरामका लागि रगत चढाउन बुधबार निकै हारगुहार गर्नुपर्‍यो । ‘ओ’ पोजिटिभ रगतका लागि उनले धेरै व्यक्तिसँत सम्पर्क गर्नुपर्‍यो । खोजेको झन्डै २४ घण्टापछि मात्र उनले बावुलाई रगतदान गर्ने व्यक्ति भेटे ।
जिल्ला अस्पतालमै सुत्केरी हुन आएकी सिस्ने गाउँपालिका–८ की कमला महतका लागि रगत खोज्न उनका श्रीमान् सुवास करिब सात घण्टा भौंतारिनुपर्‍याे यो । उनीहरू दुवैलाई नेपाली सेनाका जवानहरूले रगत दिएका हुन् । जिल्लामा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामी र उनीहरूका आफन्तले लामो समयदेखि सास्ती भोग्नुपरेको छ । हरेक दिनजसो जिल्ला अस्पतालमा ब्लड खोज्नेहरूको दौडधुप चलिरहन्छ । जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि पटक-पटक प्रयास गरिए पनि सफल भएको छैन ।
पाँच वर्षअघि रेडक्रस सोसाइटीले ब्लड बैंक बनाउने तयारी पनि गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । रेडक्रसले कोठाको व्यवस्थापन गरी केही सामग्रीसमेत जोडेको थियो । तर त्यो सामग्री पर्याप्त भएन । रगत अभावमा रहेका गम्भीर बिरामीलाई जिल्लाबाहिर रेफर गर्नुको विकल्प नभएको अस्पतालका महिला तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.केहलविक्रम जिसीले बताए । ‘हरेक अप्रेसनमा ब्लडको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं अप्रेसन गर्दागर्दै आफैंले ब्लड दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’
जिल्ला अस्पतालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र अरू सर्वसाधारणबाट रगतको आपूर्ति भइरहेको छ । रक्तदातासमेत बिरामीले खोज्नुपर्ने बाध्यता भएको त्रिवेणीका कमल खड्काले बताए । ‘उपचारका लागि अस्पताल पुग्यो, रगत चाहियो भने अर्को तनाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसको अन्त्यका लागि ब्लड बैंक स्थापनाको विकल्प छैन ।’
विशेषगरी गर्भवतीको शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी गराउनुपर्दा बढी रगत खोजिन्छ । अहिले जिल्लाका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले ग्रुप मिल्ने व्यक्तिहरूको खोजी गरेरै रगतको आपूर्ति गर्ने गरेका छन् ।
मिसन अस्पताल चौरजहारीका प्रशासक दीलबहादुर गिरीका अनुसार ८० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले रगत दिएर बिरामी बचाएका छन् । बिरामीलाई अस्पतालका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिले रगतदान गरेर बिरामीको ज्यान बचाउँनु पर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै नेपाली सेना र प्रहरीलेसमेत रगत अत्यधिक मात्रामा दिने गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै दुर्गम जिल्ला डोल्पामासमेत पछिल्लो समयमा शल्यक्रिया सेवा सुरु भएको छ । शल्यक्रिया सुरु भएसँगै रगतको अभाव हुँदा चिकित्सकले नै रगत दिने गरेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख अमरसिंह शाहीले जानकारी दिए । घरमै असुरक्षित सुत्केरी भएर सालनाल अड्किएपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पा दुनैमा ल्याइएकी ठूलीभेरी नगरपालिका–२ की २५ वर्षीया कमला रोकायलाई स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा स्थानीयवासीले रगत दिएर ज्यान बचाएका छन् । सोमबार राति सुत्केरी भएकी रोकायको साल अड्किएपछि मंगलबार दुनैस्थित स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो ।
अत्यधिक रक्तश्राव भएर अचेत अवस्थामा पुगेकी रोकायलाई ड्युटीमा खटिएका डा. रमेश रोका, स्थानीय धनलक्ष्मी रोकाय, शिक्षक जयकृष्ण हमाल, ट्रेकिङ गाइड नोर्बु लामा र सुत्केरीका श्रीमान् भूपेन्द्र रोकायले रक्तदान गरी ज्यान बचाएको प्रमुख शाहीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै गत २१ मंसिरमा ठूलीभेरी नगरपालिका–११ की तीला कार्कीलाई स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा शल्यक्रिया गर्दा रगत अभाव भएपछि नर्स दिलकुमारी बुढा, पुष्पा ओली रोकाय र ल्याब टेक्निसिएन प्रेमप्रकाश बुढाले रगत दिएर ज्यान बचाए । जाजरकोटमा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने भनिएको रकमसमेत गायब बनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, ३०, शनिबार १६:३२
वीरगन्ज । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– २३, भोलहीमा पर्ने वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्डमा एक ट्याङकरले कारलाई ठक्कर दिँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार शुक्रबार राति करिब ११ बजे उक्त दुर्घटना भएको हो । पथलैयाबाट वीरगन्जतर्फ आउँदै गरेको ना ३ ख ७५९४ नम्बरको ट्याङकरले विपरीत दिशाबाट आइरहेको बी आर ०६ सी क्यु ४१४१ नम्बरको कारलाई ठक्कर दिएको थियो ।
सो दुर्घटनामा परी कारका चालक भारतको बिहार मोतीहारीका ३४ वर्षीय राजन सर्राफ, कारमा सवार २५ वर्षीय सुरज प्रसाद र २७ वर्षीय कृत सिंहको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । चालकको उपचारका लागि वीरगन्ज ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो भने अन्य दुईजनाको वीरगन्जस्थित बयोधा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । ठक्कर दिने ट्याङकरका चालक फरार रहेको र उनको खोजीकार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, ३०, शनिबार १६:२३
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले दक्षिण एसिया फुटबल महासंघ (साफ) प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रतिबन्धपछि आयोजित भर्चुअल प्रत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक अलमुताइरीले आफूलाई प्रतिबन्ध गर्दै अन्याय गरेको बताए । उनले साफले आफ्नो नियमावलीविपरित फाइनल खेलका प्रतिबन्ध लगाएको बताए ।
उनले भने, ‘साफले अन्याय गरेको छ । यो मलाई व्यक्तिगत रिसइवी साँध्न साफले कारवाही गरेको भन्ने लाग्छ । तर यो कारवाही म व्यक्तिलाई नभएर राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकलाई हो, नेपाली फुटबलमाथि कारवाही भएको हो । उनले नियमावलीमै नभएको कारण देखाउँदै आफूलाई कारबाही गरेकोमा उनले दुःख पनि ब्यक्त गरे। ‘मलाई निकै दुख लागेको छ । साफले मलाई किन निशानामा राखेको छ । मलाई त रंगशालामा नै प्रवेश गर्न पनि नदिने भनिएको थियो, तर मैले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाएँ । मलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको छ बुझ्न सकेको छैन,’ उनले थपे ।
साफले गरेको अन्यायविरुद्ध आफू कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन इन स्पोर्ट्स (कास) मा समेत जाने उनले बताए। ‘यो निर्णय सही भएन। मुख्य खेल खेलाउने एउटा प्रशिक्षकको सपना चकनाचुर भयो’, उनले भने, ‘भारतका प्रशिक्षक प्रतिबन्धमा परेपछि मलाई पनि कारबाही गरिएको हो। यो सरासर अन्यायपूर्ण निर्णय हो। अलमुताइरीले नियम विपरित कारवाही गरे साफले फुटबल विकासबारे गर्ने कुरा बेकार हुने बताए । उनले आफ्नै नियम नमान्ने साफबाट केहि अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । ‘साफले नियम मान्नुपर्छ । मलाई लाग्छ साफले एकपक्षीय निर्णय गरेको छ । किन मेरो लागि आफ्नै नियमको सम्मान हुँदैन । खेल मैदानभित्र खेल्ने हो, मैदानबाहिर होइन । यदि साफ चाहन्छ भने सिधै भारतलाई उपाधि दिए भयो । भारतका प्रशिक्षक रातो कार्ड पाएर रिसाए भनेर हामीलाई कारवाही गर्नु ठिक भएन,’ उनले भने ।
अलमुताइरीले आफू मैदानभित्र नभएपनि टोलीले उपाधिका लागि खेल्ने बताए । उनले भने, ‘म त्यहाँ भएपनि नभएपनि टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ । तर यो न्याय भएन । हामीलाई अन्याय गरेर साफले राम्रो गरेन ।’ अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले यसबारे साफको निर्णयका विषयमा पत्राचार पनि गरिसकेको जनाइएको छ । एन्फाले प्रतियोगिता नियमावली अनुसार अलमुताइरीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नभएको भन्दै साफलाई पत्राचार गरेको छ। तर, यस बारे साफले अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।